Nin Soomaali ah oo weeraray safaaradda Faransiiska ee magaalada Darussalam iyo shan qof oo geeriyooday - Caasimada Online
Home Warar Nin Soomaali ah oo weeraray safaaradda Faransiiska ee magaalada Darussalam iyo shan...
Nin Soomaali ah oo weeraray safaaradda Faransiiska ee magaalada Darussalam iyo shan qof oo geeriyooday
Darussalam (Caasimada Online) – Madaxweynaha Tanzania ayaa maanta sheegtay in shan qof, oo ay ku jiraan saddex sarkaal oo boolis ah, lagu dilay dagaal ay la galeen nin hubeysan, meel u dhow safaaradda Faransiiska ee magaalada Darussalam.
Dambi-baaraha guud ee Tanzania Simon Sirro ayaa weriyayaasha u sheegay in ninka weeerarka soo qaaday uu kasoo jeedo Soomaaliya.
Illaa iyo iminka ma cadda haddii weerarka oo ka dhacay aagga sida aadka ah loo ilaaliyo ee xeendaabka diblomaasiyiinta uu ahaa weerar argagixiso.
Si kastaba, dambi-baare Sirrro ayaa sheegay in weerarka ay suurta-gal tahay inuu xiriir la leeyahay dagaalka jihaadka ah ee ka socda dalka deriska la ah Tanzania ee Mozambique, halkaasi oo dalal badan oo African ah ay ku biirayaan isku dayga looga adkaanayo kooxda dalkaas ka dhisan ee la baxday Al-Shabaab.
Iska hor-imaadka maanta ka dhacay dibedda safaaradda Faransiiska ayaa yimid waxyar un kadib markii madaxweyne Samia Suluhu Hassan ay saraakiisha amniga khudbad ugu jeedisey qeyb kale oo ka mid ah magaalada.
Madaxweynaha ayaa goor dambe sheegtay in saddex sarkaal oo boolis ah, askari iyo ninkii weerarka soo qaaday ay ku dhinteen iska hor-imaadka.
Safaaradda Mareykanka ayaa soo saartay diginin amni, waxayna muwaadiniinteeda ugu digtay inay ka fogaadaan aagga. Iska hor-imaadka ayaa ka dhacay meel aan ka fogeyn goobtii ay ka dhaceen qaraxyadii bishii August 1998-kii lagu weeraray safaaradda Mareykanka ee Darussalam.